Masyanya lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
mihomehy tsy misy antony, dia famantarana ny Masyanya. Eo am-piandohan'ny lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Masyanya, dia hanan-javatra mihomehy. Io hafahafa sy angular ankizivavy tsy hanelingelina ny olana sy ny fahazoan-dalana hiditra izany ho namana: Hryundelya sy Volovoloina. Avy samy hofafako hiala azy teo am-boalohany lalana, ary raha milalao aminy fikatsahana fahafaham-po sy ny Action, dia hampianatra anao hivoaka. Dia nitifitra ny mpiara-monina, manenjika jiolahy hanenjika lalàna, fa hesoriko amin'ny mpanenjika, ary handeha any amin'ny boîte de nuit, izay niasa ny DJ. Afaka hiaraka azy sy namiksovat ny mozika.
Lalao Masyanya tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Masyanya lalao
Masyanya tanteraka Africa
Ny Jolly ny Spooky Gang Adventure
Masyanya - sequencer
Ravao 2 Masyanya
Moxxi ny tabloid Adventures
Fantaro mahafinaritra sy mampihomehy tovovavy Masyanya
Lalao Online Rehetra Masyanya lalao
Tsy Nanan-tahotra Masyanya
Raha te traikefa nahafinaritra tsy hay hadinoina fa malala-tanana flavored vazivazy, manomboka ny feno Afrika Masyanya milalao izao. Izany no azo atao, manafintohina, be herim-po, nanampy ankizivavy hiatrika ny zava-tsarotra rehetra, ary malaza tony. Tsy afaka ampitahaina ho amin'ny herim-po sy nahay na dia ny mahatoky cronies – Hryundel sy Volovoloina, manaraka azy na aiza na aiza, fa amin'ny fotoan-tsarotra pasuyuschie ny loza. Faly izy ireo na aiza na aiza hiaraka azy, fa eo amin'ny faravodilanitra olana hoso-doko toy ny misy antony hijanona lavitra, manosika handroso « malemy » ary « marefo » vehivavy. Masyanya mahafantatra ary na dia matetika maneso ny buddies momba izany, saingy mora ny mamela heloka sy maka ny asa mafy rehetra ny tenany. Indray andro rehefa avy nianatra momba tambo isaina rakitry ny Afrika, dia manolotra Hryundelya Volovoloina ka mandehana hitady ny aminy. Ireo nanaiky amin'ny hafanam-po ho an'ny fampandrosoana ny drafitra, kanefa dia nivadika fa tsy tahaka ny rehetra mora araka izay toa tao an-trano ny mangina ny manda.
Friends sisa tsy amim-bola ary maika mila hameno ny kitapom-bolany mba ho afaka ny handeha lavitra kokoa. Izy ireo hankany amin'ny dadatoany Masjani mba hisambotra ny vola takiana, fa na dia eto dia ilaina ny mandresy vato misakana sy manao kilalaon-tsaina, karohy ny entana sy ny mari-pamantarana ny farany mindrana kely ny vola. Avy eo izy ireo hiatrika am-ponja tao amin'ny lair ny jiolahy sy be herim-po Masyanya indray mampiseho toetra sy tia karokaroka. Tsy vitan'ny hoe mangalatra fiara izy no Mafia, fa koa mba hamonjy ny hafa. Ao amin'ny Mazava ho azy fa ny zava-nitranga loko thicken ary miandry ny fitsarana ao amin'ny taloha ahy. Inona no ho avy izany traikefa nahafinaritra, fantatrareo, mandeha miaraka amin'ny endri-tsoratra an-dalana rehetra.
Games Masyanya tsy hamela anao ho tara
Efa nanapa-kevitra ny hanolotra anareo ao amin'ny lalao Masyanya hilalao maimaim-poana ny Odyssey tsy simba ny fandaniana ara-bola. Ankehitriny dia maro ianao fahafahana bebe kokoa ho fizahan-toetra ny tenanao ao amin'ny anjara asan'ny perky zazavavy izay tsy kivy, ary mahazo hatrany avy amin'ny toe-javatra sarotra. Fa indraindray dia miditra sy ny zavatra mampifaly ny hafa. Rehefa mitranga izany, dia mihazakazaka ny mety ho mihazakazaka ho any amin'ny mpamono olona izay te handrava azy. Games ho an'ny tovovavy Masyanya Momba ny Fanafoanana tanora VHS manolotra safidy maro noho ny tifitra. Ho hilalao ny andraikitry ny mpamono olona sy ny, naka tanjona amin'ny dia natao lasibatra, miezaka mitifitra haingana sy araka ny marina eo amin'ny quirky zazavavy izay mivoaka avy amin'ny vazan-samy hafa an-drenivohitra tontolo.
Ao amin'ny kilalao iray hafa ianao Masyanya hivadika ho amin'ny DJ, ary hamorona hira tany am-boalohany. Saingy noho io zazavavy io tsy mijanona amin'ny iray, hanatrika ihany koa amin'ny maha-mpanao gazety ao amin'ny lalao Masyanya ambanin'ny mavo gazety. Nahita asa tao amin'ny Journal « akaikin'ny antsika », Masyanya tsy mahay miasa foana ny fotoana ary matetika tara ny asa. Ary nony maraina ny mpampiasa antso sy antso maika ho any amin'ny birao, ka mampahatsiahy azy tsy hanadino ny zava-maintsy. Ny fikatsahana manomboka amin'ny zava-misy fa mila mahita fitaovana Masyanya, fa izay tsy hifarana ny Saika haka taratasy famenoana.
Nandritra ny lalao sy ny tora-pasika fahoriana Masyanya dia hahazo vaovao ifantohan'ny ny lalao hetsika. Ary ny lalao mandroso amin'ny singa ara-toekarena paikady, fa nijanona ihany koa ny fikarohana. Indray mandeha Hawaii, Masyanya namana indray niondrana an fahoriana – teny an-dalana ny zavatra madinika rehetra-bola sy ny antontan-taratasy efa very. Ny ho tafavoaka velona amin'ny paradisa ity sy any an-trano, tsy maintsy mahazo renivohitra. Vahaolana tovovavy manapa-kevitra ny handamina ny fivarotana kafe, ary rehefa improvised:
Hianao manatona Masyanya lalao an-tserasera amin'ny fotoana mahafinaritra, niainany sy ny tanjona. Any no amboary ho maro mini-lalao, Puzzles, karohy ny zavatra sy ny fitadiavam-bola vola.